Mayelana NATHI - YIWU TAIGE E-COMMERCE COMPANY
Isungulwe ku-2016, i-NEWVEW ibigxile ekwakheni ikhwalithi yomsindo esezingeni eliphakeme, enesitayela, yobungcweti, imikhiqizo emnandi nehehayo efana nezinsimbi zomakhalekhukhwini (ikhebula ledatha, ibhange lamandla, ishaja yemoto, ishaja ye-USB nokunye), ama-earphone kanye Izipikha ze-Bluetooth.
Sizibophezele ekuhlinzekeni amadili wezinzwa kwentsha yomhlaba wonke ephishekela impilo esezingeni eliphakeme, ephezulu, enamandla futhi ejabulela impilo. Sithemba ukusungula ukuxhumana okungcono nokuxhumana nezwe ledijithali. Sithatha ukuklama nokuhlinzeka ngemikhiqizo emangaza amakhasimende njengefilosofi yethu emaphakathi, futhi idale okuhlangenwe nakho okungafani nalutho okunenjongo kumakhasimende, nokunikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu futhi entofontofo.
INEWVEW ihlale inamathela kumoya womkhiqizo we "Be pragmatic, musa ukuzinza kokuncane, ungalandeli umkhuba". Sihlola ngokuqinile izinto zokusetshenziswa namachips ahlakaniphile ukulawula ngokucophelela ikhwalithi yomkhiqizo futhi silawula ngokwamanani ukuthengiswa kokuhlinzeka ngezinto ukuze kuqinisekiswe ukulethwa okufika ngesikhathi, futhi silawula inqubo ukuqinisekisa ukulethwa okufika ngesikhathi. Imikhiqizo yethu ithengisa kahle emazweni angaphezu kwezi-70 nezifunda emhlabeni jikelele, futhi inikezela ngokusekelwa kwekhwalithi kanye nesipiliyoni ekuphishekeleni kwabantu abasha indlela yokuphila enemibala.
Imikhiqizo yezesekeli zedijithali ye-NEWVEW ibilokhu ihambisana nemikhuba yemfashini yezikhathi. Njengomkhiqizo osezingeni eliphezulu, udinga ukuhola izidingo zamakhasimende. Ngakho-ke, lo mkhiqizo uzibophezele emisha eqhubekayo, uthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo, futhi wenze imikhiqizo ihlakaniphe kakhulu futhi ibe nobuchwepheshe.
Isintu singene enkathini ye-Intanethi ephathekayo kusuka esikhathini se-PC, futhi futhi sesizongena enkathini yobuhlakani nesikhathi se-Intanethi Yakho Konke, ubuhlakani be-Intanethi Yezinto kuzoba inkambiso yentuthuko yesikhathi esizayo. Abathengi babeka phambili izimfuno ezintsha zezesekeli zedijithali, ama-earphone, izipikha neminye imikhiqizo, benethemba lokuthi leyo mikhiqizo ingaba ngochwepheshe ngokwengeziwe, emazweni omhlaba, ngobuhlakani futhi ngokulula. igcwele ukuqonda kwesayensi nobuchwepheshe, futhi ihlangabezana nezidingo zemfashini zabathengi banamuhla.
● Izimfanelo zomkhiqizo: Ukubukeka okuhle kakhulu, ikhwalithi ye-Premium, ikhwalithi ye-Professional, isipiliyoni sokunethezeka ngokuphelele
● Umsuka Womkhiqizo: Ukuqamba kungamandla okushayela lo mkhiqizo, kuvulela amakhasimende ama-horizons amasha.
● Umoya womkhiqizo: Yiba yi-pragmatic, Ungazinzi ngokuncane, Ungalandeli umkhuba
Ukuma komkhiqizo: INewvew inethemba lokusebenza nabantu abasha abaphishekela ikhwalithi futhi bajabulele impilo ukudala izesekeli zefoni ephathekayo nemikhiqizo ye-Bluetooth enekhwalithi ezinzile, ukubukeka kwesitayela, ikhwalithi yomsindo wobungcweti, kanye nesipiliyoni sokugcina.
● Umsuka Womkhiqizo:I-NEWVEW ibhaliswe ngo-2016. Kusukela ngonyaka ka-2021, sekubhaliswe amazwe angama-28 aphesheya kwezilwandle futhi aqinisekisiwe ukulungiselela ukusebenza kwalo mkhiqizo emazweni omhlaba, futhi azophinde abhaliswe emazweni amaningi. I-NEWVEW isho ukuthi "indawo entsha, ukubuka okusha, umbono omusha, umbono omusha, umbono omusha", okusho ukuthi imikhiqizo yethu idlulisa isiphakamiso senani lomkhiqizo ngombono omusha. Isithombe esiphelele somklamo we-LOGO sifushane kakhulu, senza abathengi babukeke kahle futhi ngokuhambisana nekhwalithi yemikhiqizo emikhulu.
● Amanani omkhiqizo:Imfashini, Intelligent, Ukuqamba
● Imfashini: Ukuhambisana nezimfashini zezikhathi kungaqonda kangcono izidingo zentsha.
● Uhlakaniphile: Ngokwesisekelo sokuqonda izidingo zomsebenzisi, usebenzisa isoftware nobuchwepheshe behadiware ukusungula uhlelo lokuxhumana lomuntu nekhompyutha oluhlakaniphile, ukunika amandla ubuchwepheshe ukulethela abantu isipiliyoni esihlakaniphile esigcwele isimanga
Ukuqamba: Ngokwesimo sokusebenza kwamazwe omhlaba, uNewvew unolwazi ngamasiko amazwe emhlabeni wonke, enza imikhiqizo emangaza abantu futhi yeqe okulindelwe.
● Isiphakamiso sohlobo lomkhiqizo: Indlela yokuphila enemibala isho ukuthi umhlaba wabantu abasha unemibalabala futhi ugcwele amandla. Bazokhetha izesekeli zedijithali nemishini yomsindo ngombono omusha.
Ama-earphone angenantambo, Amahedisethi NgeMic, Ishaja ye-Apple Car, Ikhebula Leshaja Lefoni, Izandla Amahedsethi, Ama-headphone we-Bluetooth ane-Mic,